Iyo Mac Pro yave kuwanikwa paApple webhusaiti | Ndinobva mac
Iyo Mac Pro yave kuwanikwa paApple webhusaiti
Nhasi raive zuva rekutanga uye izvozvi sarudzo yekutenga nyowani Mac Pro iri kushanda, mune iyi nyaya isu tinofanirwa kunyevera kutanga kuti harisi timu rinotarisisa kune vashandisi senge iwe kana ini, iri Mac Pro yevashandi uye nekudaro mutengo wayo wakanyatso kukwirira mune hwaro hwaro hwaro.
Iyo Mac Pro yaitwa inowanikwa kutenga paApple webhusaiti kubva ku6.499 euros ine base base yekumisidzana iyo inotyisa. Ehe, isu takatarisana nemidziyo yekumusoro-soro uye Apple inoda kuti Mac Mac Pro igare kwemakore mazhinji kune vatengi vayo kuitira kuti vagone kuchinjwa nekufamba kwenguva, kushandura zvemukati zvinhu zvaive zvakakosha muzvikwata izvi uye zvave kutokwanisika neMac Pro nyowani.
Aya maMac Pro ane yakasimba base kumisikidzwa, ine simba rakanyanya, asi iwe unogona kugara uchiwedzera mamwe simba nekuimisikidza kwaunoda. Pamwechete aya ndiwo eBase zvirevo yemidziyo mitsva iyo zvino inogona kurairwa kubva kuApple:
8 GHz 3,5-musimboti Intel Xeon W, Turbo Inosimudzira kusvika 4 GHz
32GB (4 x 8GB) yeDDR4 ECC ndangariro
Radeon Pro 580X ine 8GB GDDR5 ndangariro
256GB SSD yekuchengetedza
Patinonyora chinyorwa ichi tiri kuona kuti zvakatakurwa zvechikara ichi zviri kubva Zvita 20 - Zvita 27 mukubuditsa pachena kana Zvita 23 - Zvita 30 nekutumira kwechinyakare kwetsika. Iyi nzira yekutakura yakaitwa neApple mazuva mashoma apfuura uye kuratidza kutumira hakusi kure kure nerusununguko asi zviripo. Chero zvazvingaitika, chinotifadza iko kusimbiswa kwekutengeswa kweMac Pro iyo nyanzvi zhinji dzanga dzichimirira kwemwedzi uye izvo izvozvi inowanikwa yekutenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Mac Pro » Iyo Mac Pro yave kuwanikwa paApple webhusaiti
Ndanga ndiri nyanzvi yemifananidzo kwemakore makumi maviri nemana uye hongu, ini ndagara ndiine Apple's pro renji. Ini ndaiwanzotora iyo modhi ine processor ine simba kwazvo (rangarira kuti kwechinguva vaive vaviri) uye zvimwe zvese zvakagadziridzwa panguva yehupenyu hunobatika hwemidziyo. Kana yave nguva yekuimutsiridza, mari yacho ingangove ingangoita € 24 / € 4500. Iyi Mac Pro inotanga pa € ​​5500 Iine yakajeka mifananidzo, 6500 GB disk (iyo inonzwika senge kuseka) uye 256 GB ye RAM, izvo zvakanaka ... kune "chikara" hachiite senge chakanyanyisa. Ini handioni pfungwa kune avo vanoedza kuyedza.
Apple inoburitsa tvOS 13.3 uye watchOS 6.1.1 yevashandisi vese [Yakagadziridzwa]
Trigger yambiro pane yako Mac kana isina kubviswa kubva kuburitsa